जापान मा5सर्वश्रेष्ठ जापानी बगैंचा! अडाची संग्रहालय, Katsura Rikyu, Kenrokuen ... - Best of Japan
जापानमा आटाची संग्रहालय = शटरस्टक
जापानी बगैंचाहरु युके र फ्रान्सेली बगैंचाहरु भन्दा बिल्कुलै फरक छन्। यस पृष्ठमा, म जापानमा प्रतिनिधि बगैचा परिचय गर्न चाहन्छु। जब तपाईं विदेशी पर्यटन भ्रमण गाइड पुस्तकहरूमा हेर्नुहुन्छ, आडाची संग्रहालय कला अक्सर एक सुन्दर जापानी बगैचाको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। अवश्य पनि अडाची संग्रहालय परिदृश्यमा आश्चर्यजनक रूपमा सुन्दर छ। जे होस्, अडाची संग्रहालय मात्र होइन सुन्दर जापानी बगैचा हो। यदि तपाईं जापान आउनुभयो भने, कृपया अन्य सुन्दर जापानी बगैंचा सबै प्रकारले आनन्द लिनुहोस्। यस पृष्ठमा, म पाँच प्रतिनिधि जापानी बगैचा परिचय गर्दछु। जापानी बगैंचाको आकर्षण एक चलचित्रको साथ भन्न सकिदैन। अझ राम्रो, एकल तस्वीरको साथ आकर्षण व्यक्त गर्न धेरै गाह्रो छ। यो किनभने बगैंचाहरु हरेक क्षण जापान मा चार मौसम मा परिवर्तन र दिन र रातको चमक मा परिवर्तन को अनुसार आफ्नो वातावरण परिवर्तन गर्दछ। कहिलेकाँही समग्र बगैचामा क्याराकुएन र Katsura Rikyu गहिरो विचार राखिन्छ। त्यसो भए, यस पृष्ठमा, म सकेसम्म धेरै फोटोहरू परिचय दिनेछु। यदि तपाईले कुनै आर्ट बुक देख्नु भयो भने म खुशी हुन्छु। छुट्टै पृष्ठमा गुगल नक्शा हेर्नका लागि प्रत्येक नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्।
कैराकुएन (मिटो शहर, इबाराकी प्रिफेक्चर)
केन्रोकुएन (कानाजावा शहर, इशिकावा प्रान्त)
Katsura Rikyu (Katsura इम्पीरियल विला, क्योटो)
अडाची संग्रहालय (यासुगी टाउन, शिमने प्रान्त)
Korakuen (Okayama शहर, Okayama प्रान्त)
वसन्त मा Kairakuen = Adobestock
Kairakuen को नक्शा
काइराकुएनलाई जापानको केन्रोकुएन र कोराकुएन संग तीन उत्कृष्ट बगैचा भनिन्छ जुन मैले यस पृष्ठको तलमा परिचय गर्दछु। Kairakuen स्थित छ Mito (Ibaraki प्रान्त) को बारे मा टोक्यो को १०० किलोमिटर उत्तर। क्षेत्र करिब 100०० हेक्टर छ। शहरको पार्कको रूपमा यसको आकार न्यू योर्कको सेन्ट्रल पार्कको छेउमा विश्वको दोस्रो ठूलो हो। यो बगैचा १ 300२ मा नरियाकी तोकुगावा द्वारा निर्माण गरिएको थियो जसले यस क्षेत्रमा शासन गर्थे। नरियाकी योशीनोबु तोकुगावाका बुबा हुन् जो पछि टोगागावा शोगुनतको अन्तिम शोगुन भए। नरियाकी एकदम ज्ञानी र बुद्धिमान व्यक्ति थिए। उसले आफ्नो विचार यस बगैचामा राख्यो। उसले सोचे कि सबै चीजमा प्रकाश र छाया छ। त्यसैले यो बगैंचामा, प्रवेशद्वारबाट केहि समयको लागि क्षेत्र अन्धकार र गहिरो चुपचाप बहाव हो। त्यस पछाडि त्यहाँ एक क्षेत्र छ जुन उज्यालो छ र राम्रो दृश्य छ। ऊ मानिसहरूसँगै यो बगैंचाको आनन्द लिन चाहान्थ्यो। त्यसकारण करीव १०० प्रजातिहरूको pl,००० बेर रूखहरू रोपियो जसबाट मानिसहरू खुशी हुनेछन्। एक बेर फेस्टिवल फेब्रुअरी देखि प्रत्येक वर्ष मार्च को अन्त मा आयोजित हुनेछ। यस बगैचामा, थप रूपमा, चेरी फूल र वसन्तमा अजालिस, शरद inतुमा हागी, चेरी फूलहरू (प्रजातिहरू एक वर्षमा दुई पटक खिलिएको) जाडोमा तपाईंलाई स्वागत गर्दछ।
ठीक छ भने, कृपया तल गेटबाट Kairakuen प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Kairakuen यो गेटबाट सुरू हुन्छ = AdobeStock
बाँस गहिरो छाया को उत्पादन खडा = AdobeStock
छाया संसार भन्दा पर, त्यहाँ एक उज्यालो दृश्य = AdobeStock छ
सुन्दर बेर फूलहरु लाई कायाकल्प गर्दछ = AdobeStock
>> Kairakuen को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
केन्रोकुएन = शटरस्टकको रात दृश्य
केन्रोकुएन कजाजा (ईशिकावा) मा रहेको लगभग १२ हेक्टेयरको जापानी बगैंचा हो। यो अद्भुत बगैंचा हो जुन मिशेलिन टुर गाइडले सर्वश्रेष्ठ तीन स्टारको रूपमा छनौट गर्यो। यो बगैचा माईडा परिवारद्वारा निर्माण गरिएको थियो जसले १ area Ma12 मा यस क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएका थिए। त्यस समयमा जापानमा शासन गर्ने टोकुगावा परिवार पछाडि माईदा परिवारको दोस्रो ठूलो क्षेत्र थियो। तथापि, टोकुगावा परिवारबाट शत्रु नहुन, म्याडा परिवारका क्रमिक शासकहरूले जापानी राजनीति जस्तोसुकै भए पनि संस्कृतिमा ध्यान दिए। फलस्वरूप, जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने सांस्कृतिक बगैंचाको जन्म भयो। त्यो केन्रोकुएन हो। केन्रोकुएन प्रभुको बगैंचा थियो, तर टोकुगावा शोगुनेटको अवधि १ th औं शताब्दीको उत्तरार्धमा समाप्त भयो र यो सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध भयो।
केन्रोकुएनको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण बिन्दु भनेको दृश्य हो जुन जापानमा चार ofतुहरूको परिवर्तन अनुसार परिवर्तन हुन्छ। किनभने कजाजावा जापानको समुद्री किनारमा छ, जाडोको मौसममा जाडोको मौसम राम्रोसँग जापानको समुद्रबाट आएको चिसो हवाको कारणले आएको छ। यस कारणले गर्दा, यो बगैचा हिउँदमा हिउँसँग शुद्ध सेतो बन्छ। त्यस समयमा कुशल मालीहरूले डोरीलाई हाँगाहरूमा जडान गर्छन् र त्यस हाँगालाई समर्थन गर्दछन् ताकि हिउँको तौलले रूखहरू टुटेन। यो सुन्दर जापानी बगैचा यस्तो नाजुक विचार संग राखिएको छ।
जब वसन्त आउँछ, रूखहरू सुन्दर ताजा हरियो र चम्किन्छन्। गर्मी मा, केन्रोकुएन पातलो हरियोले कभर गरिएको छ। शरद Inतुमा, चम्किलो रातो पातहरूले बगैंचालाई रंग दिन्छ।
जाडोमा, केन्रोकुएन धेरै हिउँ हुन्छ र यो सेतो बनेको हुन्छ = एडोबस्टक
वसन्त मा ताजा हरियो रंग बगैंचा = AdobeStock
कानाजावाको केन्रोकुएनमा बादल दिन शरद inतुमा बढ्छ, र बगैचामा छाया पनि हुन्छ = एडोबस्टक
>> केन्रोकुएनको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
जापानी बगैंचाहरु बीच, यो बगैचा मेरो मनपर्ने छ। यदि तपाईं यो बगैंचामा जानुभयो भने, तपाईंले जापानी कुलीनहरूको रमणीय संस्कृति बुझ्न सक्नुहुनेछ। २० औं शताब्दीको प्रतिनिधित्व गर्ने आर्किटेक्ट ब्रुनो ताउटले पनि कत्सुरा रिक्युको प्रशंसा गरे।
Katsura Rikyu १ family औं शताब्दीमा शाही परिवार Hachijo-nomiya Toshihito (सम्राट Goyozei का भाई) द्वारा निर्माण गरिएको थियो। यसलाई अहिले रिकु (इम्पीरियल भिल्ला) भनिन्छ, तर त्यस समयमा यो तोशीहिटोको स्वामित्वमा रहेको एउटा विला थियो। त्यस पछि, उनका सन्तानहरूले यस विलालाई सुरक्षित गरे। Katsura Rikyu कहिल्यै आगो भएको छैन। यो Rikyu हामीलाई वास्तविक जापानी कुलीन संस्कृति सिकाउँछ।
यस बगैंचाको पोखरीमा, छिमेकी काट्सुरा नदीबाट पानी तानिन्छ। कुलीनहरूले पोखरीमा एउटा सानो डु with्गामा खेले। पोखरी वरपर काठको घरहरू छन्। सबै घर सरल छ, तर धेरै प्यारा र बौद्धिक। घरका ठूला झ्यालहरू बगैंचाको लागि खुला छन्, जसले देखाउँदछ कि पूर्व कुलीनहरू प्रकृति अनुरूप जीवन बिताउन रुचाउँथे।
हाल Katsura Rikyu सरकारको इम्पीरियल घरेलु एजेंसी द्वारा संचालित हो। बगैचा हेर्नको लागि, तपाईंले अग्रिम आरक्षण गर्नुपर्छ। विगतमा, १ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरू प्रवेश गर्न सक्दैनन्, तर भर्खर भर्खर कनिष्ठ हाईस्कूलका विद्यार्थीहरू र हाई स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई प्रवेशका लागि अनुमति दिइयो। तपाईं पनी जान सक्नुहुन्छ र दिन सिधै बुक गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक बिहान ११ बजे देखि, नम्बरित टिकटहरू आगमन क्रममा वितरण गरिन्छ। यद्यपि आरक्षण चाँडै भरिन्छ। फेरी म तपाईलाई इन्टरनेटमा आरक्षण गर्न सिफारिस गर्दछु। Katsura Rikyu मा अधिक जानकारी को लागी, क्लिक गर्नुहोस् यहाँ.
Katsura इम्पीरियल भिल्ला (Katsura Rikyu), वा Katsura पृथक दरबार, क्याटो, जापानको पश्चिमी उपनगरहरुमा जापान = शटरस्टकमा सम्बन्धित बगैंचा र आउटबिल्डिंगको साथ एक विला हो।
कात्सुरा शाही विला, क्योटो जापानमा जापानी चिया कोठा। Katsura Rikyu = शटरस्टक
क्योटो, जापानको Katsura इम्पीरियल भिला (रोयल पार्क) मा एक सुन्दर जापानी बगैचाको शरद sceतु दृश्य, बरसातको दिन तालमा पोखरीमा अग्लो म्यापल रूखहरू र पोखरीमा एउटा ढु bridge्गा पुलको दृश्यको साथ = शटरस्टक
Katsura इम्पीरियल विला क्योटो जापान मा बगैचा। रातो खसेको पात Katsura Rikyu = शटरस्टक
जापानी बगैंचा कला ADACHI MUSEUM OF ART = शटरस्टकमा
Adachi संग्रहालय को नक्शा
अडाची संग्रहालय पश्चिमी जापानको Shimane प्रान्त मा एक निजी कला संग्रहालय हो। यो संग्रहालयले योकोयामा ताइकी र उमूरा शोएन जस्ता धेरै अद्भुत जापानी चित्रहरूको स्वामित्व राख्दछ। अर्कोतर्फ, तिनीहरूसँग जापानी बगैंचा छन्, र उनीहरूका बगैंचालाई हालका बर्षहरूमा धेरै सराहना गरियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको जापानी बगैंचामा विशेष "जर्नल अफ जापान गार्डनिंग" जर्नलले अडाची संग्रहालयको बगैचा जापानको सर्वश्रेष्ठ मानिएको छ। अवश्य पनि, यो संग्रहालयले मिशेलिनका तीन तारा प्राप्त गरेको छ।
अडाची संग्रहालय बगैंचाको आकर्षण बिन्दु यो हो कि यसलाई राम्ररी विवरणको लागि व्यवस्थित गरिएको छ। यस सum्ग्रहालयमा छ वटा बगैंचा छन्। आगन्तुकहरूले ती बगैंचाहरूलाई विन्डोबाट संग्रहालय भवन भित्रबाट हेर्छन्। विन्डोबाट बाहिर हेरिरहेको बगैचा एक सुन्दर चित्रको जस्तो नाजुक छ र यो पूर्णतामा उच्च छ।
मैले यस संग्रहालयका निर्देशकको अगाडि अन्तर्वार्ता लिएपछि उनी हाँसे र भने, "स्टाफ भर्ती परीक्षामा पनि हामी झाडूबाट सफा गर्न टेस्ट गर्दछौं।" कसरी उम्मेद्वार सफा गर्छ, निर्भर गर्दछ उम्मेदवारले सावधानीपूर्वक बगैचा रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन।
मलाई लाग्छ कि यस एपिसोडले ठ्याक्कै जानकारी दिन्छ कसरी अडाची संग्रहालयले उनीहरूको बगैंचा राम्ररी हेरचाह गर्छ तिनीहरू हरेक बिहान खोल्नु अघि सबै कर्मचारीहरू राम्रोसँग सफा गर्दछन्। हो, मालीहरूले बिहान सबेरै बगैचा कायम राख्छन्, तर माली बाहेकका स्टाफले पनि उनीहरूको मुटु राख्दछ र बगैंचा सुन्दर बनाउँछ।
अडाची संग्रहालय जानको लागि तपाईंले बस वा ट्याक्सीबाट योनागो एयरपोर्ट वा Izumo एयरपोर्टबाट जानु पर्छ। स्पष्ट भन्नुको लागि यो धेरै असुविधाजनक ठाउँ हो। अझै भ्रमण गर्ने व्यक्ति सबै अत्यन्तै सन्तुष्ट छन् किनकि स्टाफले एक अद्भुत आतिथ्यको भावना साझा गर्दछ।
यासुगी, जापानको आडाची संग्रहालयको कलामा सनबर्स्ट प्रभावको साथ पाइन रूखको हिउँले ढाकेको शाखा = शटरस्टक
अडाची संग्रहालय बगैचा होसियारीपूर्वक विस्तार = शटरस्टकमा सम्बन्धित छ
>> अडाची आर्ट संग्रहालयको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
Okayama शहर मा Korakuen एक ऐतिहासिक बगैचा हो = शटरस्टक
Korakuen को नक्शा
Korakuen Okayama शहरको बीचमा स्थित छ, ओकायामा महलको विपरीत नदी पार। यो बगैचा सुनामीसा इकेडाका लागि निर्माण गरिएको थियो जुन १th औं शताब्दीको उत्तरार्धमा ओकायामा महलको मालिक थियो। पार्कमा एउटा ठूलो पोखरी छ, जसको वरिपरि काठको घरहरू छन् जस्तै चिया कोठा र Noh स्टेज।
कोराकुएनलाई भनिएको छ कि यो जापानमा सब भन्दा राम्रो तीन बगैंचा हो जुन मिटोको कैराकुएन र कनाजावाको केन्रोकुएनसँग लामो समयको लागि हो। मिशेलिन टुर गाइडमा पनि कोराकुएनले तीन तारा जितेका छन्। यो बगैचाको क्षेत्र लगभग १.13.3..XNUMX हेक्टर छ र यो एकदम प्रशस्त छ। यदि तपाइँ कोराकुएन जानुभयो भने, अर्कोतर्फ ओकायामा कासल हेर्दा फुर्सतको हिड्नुहोस्।
जब म पहिलो पटक कोराकुएन गएँ, इमानदार हुन म अलिकति अलमल्ल भएँ। त्यहाँ अन्धकारबाट कैराकुएन जस्ता उज्यालो ठाउँमा कुनै परिवर्तन छैन। जाडोमा, हिउँदको दृश्य केन्रोकुएन जस्तो देख्न सकिदैन। जे होस्, म कोराकुएनमा धेरै पटक गए पछि मलाई यो बगैंचा मनपर्‍यो। Korakuen एक धेरै शान्तिमय वातावरणले भरिएको छ। Okayama प्रान्त एक शीतोष्ण जलवायु छ। कोराकुएन जुन टोकुगावा शोगुनेट कालमा निर्माण गरिएको थियो, जब जापान एकदम शान्तिमय थियो, अझै पनि शान्तिमय परिदृश्यका साथ भ्रमण गर्ने मानिसहरूलाई मोडरेट गर्दैछ।
किनकि Korakuen र Okayama महल एक पुल द्वारा जोडिएको छ, कृपया Okayama महल मा जानुहोस् यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने। मलाई लाग्छ कि Korakuen को दृश्य जुन तपाईंले Okayama महलको टावरबाट देख्नुभयो।
ओमायामा शटरस्टकमा कोराकुएन बगैचामा शिमा-जय टिहाउस
ओकायामा कोराकुएन बगैचामा पोखरीमा कोई माछा वा क्र्याप माछा, ओकायामा महलको नजिक, ओकायामा, जापान = शटरस्टक
Okayama प्रान्तमा Korakuen शरद leavesतु पात = शटरस्टक को एक ल्याण्डमार्क पनि हो
Okayama प्रान्तमा Korakuen पनि nigiht रोशनी = शटरस्टक सूट
लामो समयदेखि भनिएको छ कि जापानका तीन सुन्दर बगैंचाहरू ओकायामाको कोराकुएन, कनाजावाको केनरुकुएन र मीतोमा कैराकुएन हुन्। कोन्कुएन, होन्शुको पश्चिमी भागमा अवस्थित, १ 1700०० मा त्यस समय ओकायामा कुलको सामन्ती प्रभु (डेम्यो) द्वारा निर्माण गरिएको थियो। यदि तपाईं जानुहोस् ...
यस पृष्ठमा, म पाँच प्रतिनिधि जापानी बगैचा परिचय गर्दछु। जापानमा त्यहाँ बगैंचाहरू सामूहिक रूपमा "large ठूला बगैचा" छन्। तिनीहरू क्याराकुएन (मीटो शहर, इबाराकी प्रान्त), केन्रोकुएन (कनाजावा शहर, ईशिकावा प्रान्त) र कोराकुएन (ओकायामा शहर, ओकायामा प्रान्त) हो। थपको रूपमा, म पनि कात्सुर इम्पीरियल भिल्ला सिफारिस गर्दछु, जुन मध्ये एक हो ...
यस पृष्ठमा, Rikugien उद्यान को माध्यम बाट एक भर्चुअल पैदल लेऔं। रिकुगेन टोकियोको सब भन्दा सुन्दर जापानी बगैंचा हो। यो योशियसु यानगिसवाले निर्माण गरेको थियो, जो एदो कालमा शक्तिशाली डेम्यो (सामन्त प्रभु) थियो। भनिन्छ कि शोगुन सुनायोशी तोकुगावा प्राय: यस बगैचाको भ्रमण गर्थ्यो ...